‘Mitaky fahafahana 100 isanjato aho’ — Nandao an’i Hong Kong honina any Taiwan ny artista ara-politika iray noho ny famoretana · Global Voices teny Malagasy
Nanapa-kevitra ny handao i Kacey Wong taorian'ny fisamborana ireo mpikatroka 47
Voadika ny 24 Aogositra 2021 4:20 GMT
Pikantsary avy amin'ny A screenshot from Kacey Wong's video ‘We will meet again’.
Ny endrika niandohan'ity lahatsoratra manaraka ity dia nosoratan'i Tom Grundy ary nivoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 3 aogositra 2021. Ny endrika manaraka etoana, miampy tsonga fanampiny avy amin'ny tatitry ny Stand News, dia navoakan'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nandao an'i Hong Kong ho ao Taiwan ilay artista politika Kacey Wong noho ny filazany fa nifintina ny sehatra fanehoana artistika.
Nandao ny tanàna ilay 51 taona 17 andro (tamin'ny fotoana nanoratana) lasa izay ary nandranty hafatra fanaovam-beloma sy horonantsary tao amin'ny media sosialy tamin'ny 3 aogositra taorian'ny nanatontosany ny fitokana-monina COVID-19 tao Taichung.
‘Efa lasa aho amin'ny fotoana andraisanareo ity taratasy ity. Tsy mora ny mandao, sarotra ihany koa ny mijanona. Nifankafantatra isika nandritra ny 51 taona, tsy hanadino anareo aho. Andao hokajiana izay tsara indrindra (nifanaovantsika), veloma i Hong Kong,’ hoy ny nosoratany tao amin'ny Facebook, niaraka tamin'ny hira sy ny tsonga avy amin'ny ‘We’ll Meet Again’ an'i Vera Lynn.
Nilaza i Wong fa mila nanana paikady sy tetipanorona tamin'ny nandraisana fanapahan-kevitra handao: ‘Ho ahy, ny fotoana nahatonga ahy hanapa-kevitra dia ny [nisamborana ireo] 47′. Izany zavatra nolazainy izany dia manondro ny savaranonandom-pifidianana nahabe fanantenana tamin'ny Janoary. ‘Izany no nanamarika ho ahy ny faharavan'ny rafi-dalàn'i Hong Kong araka izay nahafantarana azy’.
Notononiny ihany koa ny sombin-tsoratra iray tao amin'ny fonom-pejin'ny gazety Ta Kung Pao velomin'i Shina tamin'ny Febroary nitsikera azy sy ireo olo-malazan'ny fampitam-baovao hafa. Nolazainy fa heveriny ho ‘lisitry ny olona hokarohina’ io ho an'i Beijing.
Nomarihan'io lahatsoratra io ny olona miisa 17 avy amin'ny filma mahaleotena sy ny indostrian'ny zavakanto miampanga azy ireo ho manandratra ny hetsika taona 2019 manohitra ny fandefasana olona an-katerena ho any Shina sy ny hetsika mitady ny fahaleovantenan'i Hong Kong. Nanamarika ny tatitra fa nanatrika TED talk tao Vienna i Wong tamin'ny 21 oktobra 2019, izay nanolorany ny hetsi-panoherana ho ‘revolisiona’ tamin'ny alalan'ny zavakantony ankalamanjana momba ny Hetsika manohana ny demaokrasia Occupy Central tamin'ny taona 2014 sy ny hetsi-panoherana taona 2019.
Nofariparitan'i Wong ho mampangotika mitovy amin'ny mihemotra anaty ady na manatrika ny fandevenana ny tenany izao fiaingàny izao. Nolazainy fa nitaintaina mafy izy rehefa tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Hong Kong satria efa notsinjoviny fa mety ho efa tafiditra ao anatin'ny lisitry ny olona karohin'ny polisin'ny filaminam-pirenena izy. Nolazainy tamin'ny Stand News:
Ny fotoana tena mampihoron-koditra indrindra dia ny tsy fahafantaranao hoe tafiditra anaty ny lisitry ny olona hosamborina ve ianao. Mety hirehitra ve ny jiro mena rehefa eo anoloan'ny latabatry ny fifindra-monina ianao? Na ny fahafahanao mandao ny tanàna aza dia toy ny filokàna… Eo amin'ny toe-tsaina dia mila miomana ianao fa tsy ho afa-miverina intsony ao Hong Kong ary mety ho ajanona ianao mandritra ny fifindràn-monina, mety hosamborina, gadraina ary hiatrika fitsaràna maharitra dia maharitra.
Nisy mpanao gazetin'ny Apple Daily, Fung Wai Kong, voasambotra tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Hong Kong tamin'ny 28 jona 2021 raha niezaka ny handao ny tanàna izy nandritra ny famoretan'ny polisy ilay seha-baovao.
Fanehoana artistika nataon'i Kacey Wong nandritra ny fihetsiketsehana fanoherana ny fandefasana olona ankaterena ho any Shina tamin'ny taona 2019. Saripikan'i Kacey Wong tao amin'ny Stand News.
Tamin'ny faran'ny volana jona lasa teo, mba somary nahiratra fijery ihany ilay artista momba ilay lalànan'ny filaminana najoron'i Beijing raha niteny tamin'ny tamin'ny HKFP fa mety hampirongatra ny fahaiza-mamorona ao Hong Kong ny lalàna.
Na izany aza, nilaza izy fa tsy tsinjony ny hamafin'ny famoretana: ‘Ny fanontaniana lehibe indrindra dia ny hoe inona no ilaiko? Nahoana aho no handao? Ary dia niharihary izany… ny fahalalahana maneho amin'ny fomba artistika’, hoy izy. ‘Tiako ary takiako ny fahafahana 100 isanjato, tsy misy marimaritra iraisana’.
Hatramin'ny nisian'ny hetsika elo nanohanana ny demaokrasia taona 2014, notadiavin'i Wong ny hanosehana ny fetran'ny zavakanto ho fomba hananan-kevitra hafa eny an-dalambe ary hita matetika tamin'ny hetsika fanohanana ny demaokrasia 1 jolay izy. Ny fampisehoana nataony tamin'ny taona 2018, ‘Ilay Tia Tanindrazana (The Patriot)’, nampiseho azy nihira ny hiram-pirenena shinoa amin'ny angodorao avy ao anaty karakara vy mena teo an-tokotanin'ny fanorenana maro an'ny Governemanta Shinoa ao Hong Kong.
’The Patriot’ Saripika avy amin'i Kacey Wong tao amin'ny CitizenNews
Raha maro amin'ireo Hongkongers no mifindra mankany UK, nilaza kosa i Wong fa nofinidiny manokana Taiwan noho ny fananany seha-javakanto miraondraona manolotra hirika hitomboana: ‘Nankasitrahako hatry ny ela ny kolontsaina sy ny zavakanto ao Taiwan, mihevitra aho fa efa matotra tsara sy lalina izany ary sady be filirony no bontolo ny fiaraha-monina, ary tiako izany’.
Nolazainy tamin'ny Stand News fa noraisiny ho toy ny adidiny hamoahana ny feon'ny Hongkongers izany ary tolorany hevitra ireo mbola manohy monina ao Hong Kong mba hiondrikondrika (tsy ho be fisehosehoana) sy hahatandrina tsara rehefa maneho hevitra:
Eo ambanin'ity lazaina ho Vanim-potoana vaovao ity, mila maka volontany amin'ny fomba vaovao [fanehoana antsika] isika, tsy mety intsony ny fomba teo aloha. Tsy ho afa-mitoditodika lava any amin'ny andro fahiny mahafinaritra isika. Mila mahay mamorona isika miatrika ity politika maimbon'ny Vanim-Potoana vaovao ity.
Tamin'ny volana marsa ny Lehiben'ny mpanatanteraka Carrie Lam nanao voady hametraka ny tanàna ho ao anaty ‘fanairana feno’ hiadiana amin'ny asan-javakanty heverina hampidi-doza ny filaminam-pirenena ao amin'ireo tahala vatsian'ny governemanta vola ao an-tanàna.
Tamin'ny jona 2020, nampidirin'i Beijing tao anatin'ny lalam-panorenana kelin'i Hong Kong mivantana — tsy nandalo ny rafitra fanaovan-dalàna ao an-toerana — ny lalànan'ny filaminam-pirenena — taorian'ny taona nanjakan'ny hetsika fanohanana ny demaokrasia sy ny rotaka nanaraka izany. Napetraka ho heloka bevava ao antin'izany ny fampisaraham-bazana, fisintahana, firaisana tendro amin'ny hery vahiny ary ny hetsika fampihorohoroana, izay nofaritana ho tafiditra ao anatin'ny fanapahana ny fitateram-bahoaka sy fotodrafitrasa hafa (teo aloha). Nanome vahana ny polisy izany ka nanaitra ireo Demaokraty, vondrom-parahamonim-pirenena sy mpiara-miasa eo amin'ny fifanakalozam-barotra, noho ilay lalàna natao hampanginana sy hanasaziana ireo mpanohitra ao Shina. Na izany aza, nilaza ny manampahefana fa nampiverina amin'ny laoniny ny fitoniana sy ny fandriampahalemana tao an-tanàna izany.